पुरुषलाई बलात्कार दालभातजस्तै « aamsanchar.com , aamsanchar
पुरुषलाई बलात्कार दालभातजस्तै
म यौन–स्वाधीनतामा विश्वास गर्छु । अन्य स्वतन्त्रता झैँ मान्छेलाई यो स्वतन्त्रता आवश्यक छ । जबर्जस्ती किन गर्ने ? महिला भिखारी होस् अथवा चरित्रहीन, यदि ऊ इच्छुक छैन भने उसलाई छुने कसैको हक हुन्छ ?
सन् १९९२ सेप्टेम्बर २३ का दिन बिहानै कलकत्ताको फूलबगानमा सुतिरहेकी एउटी फुटपाथे महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उनलाई प्रहरी भ्यानमा हाल्नेमा हबल्दार नीलकमल, सनातन र भोलेनाथ थिए । उनीहरुले ती महिलालाई थानामा लगे । थानाको ढेडतले भवनको कोठामा ती महिलाको मुखमा कपडा कोचेर तीनैजनाले बलात्कार गरे । बलात्कार गरिरहेकै समय उनको मुखको कपडा बाहिर निस्क्यो र उनी चिच्याइन् । अर्को कोठामा सुतेका तीन हबल्दारको निन्द्रा खुल्यो ।
ती महिलालाई बचाउनुको सट्टा ती तीन हबल्दारले पनि बलात्कार गरे । घटनापछि ती महिला आफ्ना केही साथीसँग थाना गई, आफूमाथि भएका सबै कुरा थाना प्रमुखलाई सुनाई । घटनाको सम्पूर्ण बेलिविस्तार कमिस्नरले सुने । प्रहरी कमिस्नर छानबिनका लागि स्वयम् थानामा आए । उनले ती पाँचै जनालाई नौकरीबाट बर्खास्त गरे र जेल हाले । थाना प्रमुखलाई पनि सस्पेन्ड गरे । उसको सरुवा भयो, रिजर्भ फोर्समा । यो बलात्कारको घटनाले पश्चिम बंगाल राज्य प्रहरीविरुद्ध व्यापक आक्रोश शुरु भयो । कलकत्ता शहरमा बाटोमा हिँड्ने मान्छेले प्रहरीमाथि थुक्न थाले । कयौँ ठाउँमा ट्राफिक प्रहरी पिटिन्थे । प्रहरी हबल्दार नीलकमललाई आजीवन काराबास सजाय सुनाउँदै एक वर्षपछि फैसला सुनाइयो ।
हादिसमा लेखेको छ, ‘श्रीमान यदी श्रीमतीलाई यौनसम्पर्कका लागि बोलाउँछ भने, श्रीमती त्यतिबेलै श्रीमान कहाँ जानु पर्छ, नत्र भने त्यो रात उनका लागि भयानक गालीद्वारा बिताउनु पर्नेछ, श्रीमान मालिक हो भने श्रीमती उसकी दास, त्यसैले हादिसको निर्देशन शिरोधार्य छ । नत्र मान्छेले जुरिसप्रुडेसको आधुनिक कानुन नै मान्नुपर्छ ।’
फैसला सुनाउँदै न्यायाधीसले भने, ‘यो घटना प्रहरी हिरासतमा भयो, जसलाई आम जनताका लागि सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ भनिन्छ । यो घटनाले अल्बर्तो मोरेबियाको प्रख्यात उपन्यास ‘टू वमेन’ को सम्झना गराउँछ, जहाँ गिर्जाघरभित्र सेनाले एक किशोरीलाई बलात्कार गरेका थिए ।’
हबल्दार नीलकमल रुँदै थियो, तर उसको रुवाईले कसैको मन पग्लेन । उनलाई आजीवन काराबास को सजाय तोकियो र हाल प्रेसिडेसी जेलमा सजाय भोगिरहेको छ । के यस किसिमको घटना हाम्रो देशमा कल्पना गर्न सकिन्छ ? फुटपाथमा कुनै महिलालाई बलात्कार गरे बलत्कारीलाई जेल हाल्लान् ?
हालसालै पटुआखालीबाट ढाका (बंगलादेशको राजधानी) आउँदा बाटोमा ड्युटीमा बसेका अन्सारले एक महिलालाई बलात्कार गरे । खबर पाएपछि ती अंसारलाई जिल्ला प्रमुखले सस्पेन्ड गरे । तर अन्त्यमा उनै बलत्कारीको पक्ष लिएर, यस्तो भनियो कि, ‘ती महिला चरित्रहीन थिई ।’
चरित्रहीन भए पनि के उसलाई बलात्कार गर्ने हक तिनीहरुलाई थियो ? ऊ चरित्रहीन भएकै कारण बलात्कारीका अपराध माफी हुन्छ ?
कुनै फुटपाथकी महिला भएकी भए उसको पनि त्यस्तै अवस्था हुन्थ्यो । उसबारे यस्तो भनिथ्यो कि, ‘फुटपाथमा बस्नेको बलात्कार हुनु कुनै जघन्य अपराध होइन ।’
मैले सबै कुरा बेझेकी छु । आजभोलि पुरुषका लागि बलात्कार दालभात खाएजस्तै हो । ‘सम्पूर्ण पुरुष मनमनै महिलाको बलात्कार गर्छन्,’ कसैले भनेको थियो । म यस भनाइप्रति सहमत हुन चाहन्छु । तर मेरो वशमा छैन ।
मेडिकल कलेजको तेस्रो वर्षमा प्रोफेसरले बलात्कारको परिभाषा पढाएका थिए । हामी सबैले त्यो परिभाषा रट्नु परेको थियो ।
ख. १५ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलासँग अनुमति लिएर,
ग. १५ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलासँग अनुमति बिना नै,
घ. १६ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलासँग अनुमति नलिएर,
ङ. डर देखाएर, धम्काएर, कुनै नशालु पदार्थखुवाएर, झुठ बोलेर, जबर्जस्त गरेर, छद्मभेष बनाएर कुनै बालिका वा महिलालाई,
च. कुनै पागलसँग यौनसम्पर्क गरे त्यसलाई बलात्कार भन्छन् । उसो त यौनसम्पर्क गर्नै पर्छ, यस्तो कुनै कारण छैन । महिलाको योनीलाई पुरुषको लिङ्गले स्पर्श गर्ने बित्तिकै बलात्कार भनिन्छ । यो परिभाषा कति मान्छे जान्दछन् ? यदि जान्छन् भने पनि के यसअनुसार ती मान्छेहरु विचार गर्छन् ? गदैनन्, यस्तो हुँदै हुँदैन ।
महिला अथवा केटी आफ्नो इच्छाअनुसार कपडा लगाउँछे, हाँस्छे, हिँड्डुल गर्छे भने त्यसै कारण ऊ बलात्कारको शिकार हुनु पर्ने ? यो किन ? महिलामाथि थोपरेका यी सबै निरर्थक तर्क त छँदैछन्, त्यसैमाथि साक्षीसबुतको झमेला पनि छ । बलात्कार कसैले साक्षी राखेर गर्दैन । तर पनि साक्षी खोजी गरिन्छ । एक महिलाको साक्षी र बयानले पुग्दैन । दुई महिला चाहन्छिन् । जहाँ एक पुरुषले काम चल्छ तर महिला दुई नभए त्यसलाई प्रमाण मानिँदैन । किनकी यस देशको कानुनमा दुई महिला एक पुरुष बराबर हुन्छन् ।
चरित्रहीन अथवा फुटपाथकी महिला भए कानुन बदल्नु हुँदैन । यो कुरा कहीँ कतै लेखेको छैन कि, यदि महिला चरित्रहीन भए बलात्कारको सजाय कम हुन्छ ।’
कलकत्तामा बलत्कारको सजाय आजीवन काराबास हुनुमा राज्य सरकारको सहयोग हो । हाम्रो देशको सरकारले कति बलात्कारीलाई आजीवन काराबासको सजाय सुनायो ? मलाइ यस्तो भन्न कुनै संकोच छैन ।
यो देशमा बलात्कार भए पनि बलात्कारकी शिकार बनेकी महिलालाई नै अपराधी मानिन्छ । उल्टो यस्तो भनिन्छ कि, उसैले बलात्कारका लागि उक्साएको हो । उसको नशालु हेराइ, मन्द मुस्कान, पारदर्शी कपडा सबै बलात्कारअनुकुल थियो ।’
समाजमा यी सबै तर्कको धेरै सम्मान गरिन्छ । यदि एक महिला अथवा केटी आफ्नो इच्छाअनुसार कपडा लगाउँछे, हाँस्छे, हिँड्डुल गर्छे भने त्यसै कारण ऊ बलात्कारको शिकार हुनु पर्ने ? यो किन ? महिलामाथि थोपरेका यी सबै निरर्थक तर्क त छँदैछन्, त्यसैमाथि साक्षीसबुतको झमेला पनि छ । बलात्कार कसैले साक्षी राखेर गर्दैन । तर पनि साक्षी खोजी गरिन्छ । एक महिलाको साक्षी र बयानले पुग्दैन । दुई महिला चाहन्छिन् । जहाँ एक पुरुषले काम चल्छ तर महिला दुई नभए त्यसलाई प्रमाण मानिँदैन । किनकी यस देशको कानुनमा दुई महिला एक पुरुष बराबर हुन्छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालयकी महिला कर्मचारीमाथि निर्देशकको ड्राइभर र उसका आसेपासे मिलेर बलात्कार गरे । ती बलात्कारीविरुद्ध कुनै कारबाही भयो या भएन । भएको भए कुन किसिमको भयो थाहा पाउन सकिनँ ।
नीलकमल के यो देशको लागि उदाहरण बन्न सक्दैन ? नीलकमल प्रेसिडेन्सी जेलमा आजीवन काराबास सजाय भोगिरहेका छन् । चाहन्छु, ‘मेरो देशमा बलात्कारीलाई आजीवन काराबास होस् ।’ म चाहन्छु यहाँका लान्चका अंसारहरु र रक्षकलाई पनि आजीवन काराबास सजाय होस् । प्रहरी र गार्डहरु मात्र होइनन्, समाजको हरेक क्षेत्रमा ।
म यौन–स्वाधीनतामा विश्वास गर्छु । अन्य स्वतन्त्रता झैँ मान्छेलाई यो स्वतन्त्रता आवश्यक छ । जबर्जस्ती किन गर्ने ? महिला भिखारी होस् अथवा चरित्रहीन, यदि ऊ इच्छुक छैन भने उसलाई छुने कसैको हक हुन्छ ? हुँदैन । राज्यको विचारमा बलात्कारी पटकपटक बाँच्छन् । यसमा देश नै महिलाको नागरिक अधिकारमाथि थुक्छ । यति हुँदा पनि यस देशकी महिला मुख खोलेर बलात्कारीलाई आजीवन काराबासको सजायका लागि आवाज उठाउँदैनन् र आन्दोलन गदैनन् भने मैले भन्नै पर्छ ती निर्बोध महिला सायद मनमनै बलात्कारको शिकार हुन चाहन्छन् ।
( जनता समाचारवाट साभार )
सुरुङ्गामा आधुनिक विद्यालय ‘हाम्रो पाठशाला’